ဖခင်ဖြစ်သူမှ သမီးဖြစ်သူအား အသက် ၁၂ မှ ၁၈ နှစ်အထိ အကြိမ်ကြိမ် သားမယားပြုကျင့်သော အမှု့ – Myanmar Update News
ဖခင်ဖြစ်သူမှ သမီးဖြစ်သူအား အသက် ၁၂ မှ ၁၈ နှစ်အထိ အကြိမ်ကြိမ် သားမယားပြုကျင့်သော အမှု့
May 7, 2020News-Update0 Comments
နေပြည်တော် လယ်ဝေးမြို့နယ်တွင် အဖေရင်းဖြစ်သူမှ သမီးအရင်းဖြစ်သူအား ၁၂နှစ်အရွယ်မှစပြီး ၁၈နှစ်အချိန်ထိ ကာမကျူးလွန်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သော ထူးခြားသတင်း။
နေပြည်တော် လယ်ဝေးမြို့နယ် အေလာနယ်မြေရဲစခန်းအပိုင်၌ အဖေဖြစ်သူမှ သမီးအရင်းဖြစ်သူအား သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း တိုင်တန်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းသိရှိရပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ သမီးဖြစ်သူမဇင်ဇင် အသက်(၁၈)နှစ်(ဘ)ဦးနန်းဝင်းမှာ ဆီးများကျဉ်နေကြောင်း ပြောပြသဖြင့်ပျဉ်းမနားမြို့ဆေးခန်းသို့သွားရောက်ပြသခဲ့ရာသမီးဖြစ်သူ(………) တွင်
ကိုယ်ဝန်(၂)လရှိနေပြီးဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးသိရှိရ၍ သမီးဖြစ်သူမ(………..)မိခင်မှမေးမြန်ကြည့်ရာ သမီးဖြစ်သူမှ ၎င်းအားလွန်ခဲ့သော အသက်(၁၂)နှစ်အရွယ်မှစပြီး ဖခင်ဖြစ်သူနန်းဝင်းမှ တစ်လလျှင်(၂)ကြိမ်ခန့်သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း နန်းဝင်းမှာသမီးဖြစ်သူအား ၎င်းကိုင်ဆောင်သောဖုန်းအတွင်းမှ ညစ်ညမ်းသောဗီဒီယိုများပြသကာ
သားမယားအဖြစ်မကြာခဏ ပြုကျင့်ခဲ့ပြီး နင်အမေကိုလည်းမပြောနဲ့ဘယ်သူကိုမှလည်းမပြောနဲ့ အဖေနှင့်အတူနေရင် သမီးဘာမှမဖြစ်ဘူး သားအဖချင်းပဲဟု နန်းဝင်းမှပြောဆိုခဲ့ကြောင်း…. ထိုသို့ပြောဆိုပြီးမကြာခဏဆိုသလို သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ကာ ယခုနှစ်သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ထိ ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း….မိခင်မရှိသည့်နေဘက်အချိန်များတွင်သာပြုကျင့်လေ့ရှိကြောင်းကို
သမီးဖြစ်သူမ(……….)မှမိခင်အား ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာ သမီးဖြစ်သူနှင့်ရင်းရင်းနီးနီး နေထိုင်သည်ကို သိရှိနေသော်လည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုကြောက်သဖြင့် မပြောရဲပဲ ယခုသမီးဖြစ်သူမ(…………..)တွင်ကိုယ်ဝန်(၂)လရှိကြောင်း သိရှိရချိန်မှ မေးမြန်းသိရသဖြင့် သမီးဖြစ်သူ မ(………….)အား သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့သူ
နန်းဝင်းအသက်(၃၆)နှစ်(ဘ) ဦးအောင်လွင် ပင်သောင်ရွာ ပင်သောင်အုပ်စု လယ်ဝေးမြို့နယ်နေသူအား ဥပဒေအရအရေးယူပေးပါရန် တရားလိုမစိန်မြင့်မှ အေလာနဗ2မရဲစခန်းသို့ တိုင်တန်းမှူဖြစ်ကြောင်း အေလာနယ်မြေ ရဲစခန်းမှရဲမှတ်တမ်းများအရသိရှိရပါသည်။ အဆိုပါတိုင်တန်းမှူအား အေလာနယ်မြေရဲစခန်းနယ်ထိန်း ခေါင်းဆောင်ဒုရဲအုပ်-ဟန်ဝင်းအောင်နှင့် နယ်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်များသည်
တရားခံရှိရာသို့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေ ၅ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း အချိန်တွင်သွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အေလာနယ်မြေရဲစခန်းမှ(ပ)၉၉ /၂၀၂၀ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-(၃၇၆) ဖြင့်အမှူဖွင့်ပြီး အေလာနယ်မြေစခန်းမှ စခန်းမှူး ရဲအုပ်မြက်မင်းသူမှ ဆက်လက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း သတင်းစုံစမ်းသိရှိရသည်။ သတင်းမှတ်တမ်း- အေလာသား(P.F.A) ပြည်သူ့မဏ္ဍိုင်~နေပြည်တော်ဟစ်တိုင်